Umuzwa ongavamile wokuzwa enja | Izinja Zomhlaba
I-Encarni Arcoya | | Izinja ezijwayelekile
El ukuzwa kungenye yezinzwa ezithuthuke kakhulu zenja. Lezi zilwane ziyakwazi ukuzwa amaza angenakwenzeka ukuba abantu babone, ukucosha imisindo kude kakhulu nokuphakama okuphezulu ngokweqile. Kungakho bezonda imisindo emikhulu futhi badinga ukuthi sikhulume nabo ngezwi elipholile, elizolile ukuze sibafundise.
Ngenkathi abantu bebona imisindo kusuka ezinyaweni ezingama-6 kude, izinja zingezwa imisindo kusuka ezinyaweni ezingama-25 noma ngaphezulu. Indlebe yakho ibhalisa kuze kube kunyakaza okungu-35.000 ngomzuzwana, savela izikhathi eziphindwe kane kunezethu. Eqinisweni, uhla lwazo lokuzwa lusuka ku-10.000 50.000 kuya ku-16.000 20.000 Hz, okungolabantu abavela ku-17 kuya ku-9 XNUMX Hz.Futhi izinja zinemisipha eyi-XNUMX endlebeni ngayinye, uma kuqhathaniswa nezingu-XNUMX ezindlebeni zabantu.
Nokho, umthamo wokuzwa walezi zilwane uyehluka kuye ngohlobo. Uma banezindlebe ezivulekile njenge-German Shepherd noma i-Alaskan Malamute, bazozwa kalula. Kodwa-ke, izinja ezinamalebe ezinjenge-Beagle noma i-Cocker spaniel azinakho ukuzwa okuhle. Yize ukusebenza kuzo zonke izinhlanga kufana kakhulu. Kwenzeka okufanayo nakubudala, ngoba inja endala inamandla amancane okuzwa kunentwana, futhi ingaba yisithulu.
Ngakolunye uhlangothi, izinja ziyakwazi ukucosha imisindo ephansi kakhulu futhi lapho zilele. Yini enye, indlebe yakhe iyakhetha kakhulunjengoba bekwazi ukuhlukanisa kalula imisindo engaphandle komsindo ozungezile.
Kungenxa yakho konke lokhu izinja zizwela kakhulu kumathoni wezwi. Imvamisa bakhombisa ukusabela okuhle emisindweni ethulile futhi emnandi, kepha kunalokho, bayacasula kakhulu emisindweni enkulu. Ngalesi sizathu, kufanele sisebenzise ithoni eqinile ukubakhuza, kepha ungalokothi umemeze.
1 Isebenza kanjani indlebe yezinja?
2 Kuyini ukuzala kwenja okuzwa kahle kakhulu?
2.3 IBoston Terrier
2.4 Ama-eskimo aseMelika
2.5 Isikhonkwane esincane
3 Kukangaki ukuzwa kwenja kungcono uma kuqhathaniswa nokwabantu?
4 Indlebe Yenja: Ukufundisa Inja Yezithulu
5 Indlebe yenja ekuqeqesheni inja
6 Ungayinakekela kanjani indlebe yezinja
6.1 Lungiselela lokho okuzokudinga
6.2 Qala ukuhlanza ngaphandle
6.3 Sika izinwele
6.4 Okunye ukuhlanza
6.5 Hlanza umsele wendlebe
6.6 Hlanza izinsalela zendlebe
7 Izimo ezingadala isifo sendlebe
7.1 Izinkinga zenhlanzeko ezingezinhle
7.4 Izinto noma izimuncagazi endlebeni yangaphakathi yezinja
Isebenza kanjani indlebe yezinja?
Ngaphandle kokungabaza, omunye wemizwa izinja ezithuthuke kangcono ukuzwa, lapho ikwazi khona ukubona imisindo kumaza angavele angatholakali kubantu. Ngakho-ke unombono omuhle Njengabantu singayizwa imisindo ekhiqizwa kusuka kumamitha ayi-6 ngokusobala, kepha esimweni somngane wethu we-canine lokhu kuphakama kakhulu, okwenza bakwazi ukuzwa kahle ngamamitha angama-25 noma mhlawumbe ngaphezulu.
Vele, lo mthamo wokuzwa uzoncika kakhulu kohlobo lwenja, ngoba uzobe uqaphele ukuthi kunezinhlobonhlobo izindlebe zazo eziqondile ngenkathi ezinye zinazo phansi futhi zinde, konke okunomthelela ekhonweni lokulalela.
Kepha zisebenza kanjani izindlebe zezinja, ezivumela lobu buthi bokuzwa? Ake siqale ngokuthi lesi sitho sinezingxenye ezintathu: indlebe engaphandle, emaphakathi nengaphakathi.
Lapho kuqhamuka igagasi lomsindo elishaya inja, ngokushesha litholwa yingxenye evezwe kakhulu yendlebe yakho, eyindlebe, kusuka lapho lo msindo uhanjiswe khona. I-pinna yingxenye esebenzayo kakhulu evumela ukuhamba okuhle, ngenxa yemisipha yayo eyi-17.
Ukusuka lapho igagasi lomsindo uhamba ngomsele wendlebe uye eardrum. Lapho zikhiqiza ukudlidliza kwe-eardrum futhi lokhu kwenza amathambo amancane awakhulise kakhulu ukuze kuthi endlebeni yangaphakathi inja ikwazi ukukhomba uhlobo lomsindo.
Kuyafaneleka ukukhumbula lokho indlebe ephakathi inomsebenzi wokulinganisa umzimba wenja yethuKungakho uma kunokungahleleki kuleli phuzu, kungaveza ukunyakaza okungaqondakali noma ukuwa.
Kuyini ukuzala kwenja okuzwa kahle kakhulu?
Akungabazeki ukuthi amandla okuzwiwa ezinikezwe ngawo izinja akunakuphikwa, manje, ukukhuluma ngohlobo oluthile oluvelele ngaphezu kwezinye ngenxa yokuzwa kwalo okuthuthuke kakhulu akulula kangako, yize kukhona ezinye ezivelele kulokhu.
Zonke izinhlobo zalolu hlobo, noma ngabe lujwayelekile noma lincane, zinokucacile lokho izindlebe zakhe zihlala zilungiswe kahle kakhulu ngakho-ke, bahlala beqaphile unomphela benikeza impendulo ngokushesha emisindweni abayibonayo.
Un umnakekeli onamahloni amancane ukuthi uyakwazi ukusebenzisa kahle kakhulu ukuthatha umsindo omncane futhi asabele kuwo ngamandla. Zivame ukuba yizinja ezinomsindo kakhulu, lokho kungenxa yesimo sabo esihle sokuzwa.
Olunye lwezinhlobo ezinokuzwa okuhle kakhulu, ngaphandle kokungabaza, izindlebe zabo ziyefana nezelulwane okuvame ukuhamba ngokuthanda lapho kutholwa khona ukudlidlizela, ukuze kuqoqwe inani elikhulu kakhulu lemininingwane ye-sonic elizungezile.
Futhi ngezindlebe eziqondile, amandla aphakeme wokuthwebula imisindo ahlangana kahle kakhulu nomqondo wokuvikela nowokuvikela walolu hlobo, okubonakala ngokungabethembi kakhulu abantu ongabazi. Le yindlela ahlala azi ngayo kakhulu okwenzeka endaweni yakhe, ukwazisa umndeni wakhe ngokuvikela.
Usayizi wabo omncane nokuntuleka kwamandla okwenza isenzo sokuvikela ngokomzimba, banxephezela kahle kakhulu ngokuqapha kwabo unomphela, ukubamba yonke imisindo nokwenza umsindo omkhulu ukukuxwayisa ukuthi ubhekile.
Kukangaki ukuzwa kwenja kungcono uma kuqhathaniswa nokwabantu?
Mayelana nokuzwela kokuzwa kwenja, sinokuthi ithoni yomsindo ingalinganiswa ku-Hertz noma kumjikelezo wayo u-Hz futhi uma lokhu kweqa u-1000, khona-ke sikhuluma nge-Kilohertz noma yini i-kHz efanayo. Kubantu kujwayelekile ukulalela nge-16.000 noma i-20.000 Hz, noma kunjalo ngezinja kuyinto ejwayelekile ukubona imisindo ebangeni lama-10.000 kuye ku-50.000 Hz. Izinja ezinamaqhubu afana ne-Alaskan Malamute zibona imisindo ngokuqinile, ngenxa yalesi morphology.
Thatha isibonelo icala leziqhumane ezihlekisa abaningi, kepha ziyingozi enkulu ezindlebeni zezinja. Amandla okuqhuma kwamarokhethi asukela kuma-decibel angama-85 kuye kwangama-150, okuqhathaniswa nalokhu okukhishwe yindiza yempi engaba ngu-130 db.
Manje ake ucabange ukuthi inja yakho, ebangeni elifanayo ukusuka kuqhuma njengawe, izoyizwa iphindwe kathathu, okungukuthi, cishe ku-450 db. Lokhu kuchaza kahle liphezulu kangakanani izinga labo lokuzwela ekuzweni kwabantu nokuthi kungani iziqhumane zibabangela ingcindezi, ukwethuka nokushaya kwenhliziyo okusheshayo.
Endabeni yezinja ezindlebe zazo ezehlisiwe njengeCocker Spaniel, ukuzwela kuvame ukwehla yize kuzohlala kubi kakhulu kunabantu. Ngokufanayo, kufanele kucatshangwe ukuthi ngokuthuthuka kweminyaka lo mqondo uzoncipha futhi bangaba yisithulu ngokuphelele.
Akusizi ngalutho ukuzama ukumangaza inja yakho, noma ngabe ilele, selokhu unekhono lokuthola imisindo ephansi kakhulu ukwazi ukuhlukanisa ngisho nalokho okujwayelekile kwemvelo ebazungezile, kusukela kokusha.
Indlebe Yenja: Ukufundisa Inja Yezithulu
Inja eyisithulu isilwane esikhetheke kakhulu ngenxa yesimo sayo, noma kunjalo, ngesikhathi sokuqeqeshwa imigomo iyefana naleyo esetshenziswa ezinjeni ngawo wonke amandla azo, ngoba inhloso iyefana: ukuthi izimilo esizifunayo zihlanganiswe kuzo ngokunxeshezelwa.
Kunjalo udinga njengomqeqeshi ukuze ubekezele ngokwengeziwe futhi uchithe isikhathi esithe xaxa, ize ifinyelelwe imiphumela oyifunayo. Kodwa-ke, impela umqeqeshi uxhumana ngokujwayelekile nenja ngokusebenzisa imiyalo ethile engayizwa, yingakho kudingekile ukusebenzisa izindlela ezihlukile ezinjeni ezinokukhubazeka kokuzwa.
Kulokhu okuphumelele kakhulu ngu sebenzisa izinto ezibukwayo ekusebenzeni, okufakazelwa ukuthi izinja zigxila kahle kakhulu ngokushesha okukhulu kunemiyalo yomlomo. Into yokuqala lapho-ke kuzoba ukuthola ukuthi yiziphi izimpawu ozozisebenzisa kule nqubo bese uzihlanganisa nomndeni wonke.
Kubaluleke kakhulu ukuthi lezi zimpawu ezibukwayo njalo kucace bha futhi kuhlukileNgaphandle kwalokho, ukuqeqeshwa kuzobe kulahla ukwehluleka futhi uzodala ukudideka okuningi enjeni, kukubeka esimweni sokungakwazi ukufunda.
Inselelo elandelayo ukuthi gcina ukunaka kwesilwane sakho kugxile kuwe, Azikho iziphazamiso. Ngalokhu, into esebenza kahle kakhulu ukuthi ube nomklomelo esandleni sokuziphatha ngakunye akuphindayo futhi akufunde, kube ukulunywa okuncane okukhonjiswe kakhulu kokudla noma amaswidi ezinja.
Lokhu kuzokwenza kube lula ngabo ukugxilisa ukunaka kwabo konke kuwe futhi babambe izimpawu kahle, futhi bafunde ukuqonda ulimi lwakho lomzimba kahle ukuze bathole lowo mklomelo omnandi. Ngale ndlela uqinisa isimilo esihle futhi uthuthukise ukufunda, yize ungasebenzisa futhi ama-caress noma ubanikeze ithoyizi.
Indlebe yenja ekuqeqesheni inja
Lo mqondo udlala indima ebalulekile ekuqeqesheni inja ngoba ingenye yezinto ezithuthuke kakhulu enayo, ngenxa yabo babona imininingwane eminingi ye-sonic ukuthi uma uyiqeqesha ungayisebenzisa ukuthuthukisa amakhono ayo.
Hhayi ngeze bayakwazi ukubona imisindo evela kumamitha angama-200 noma ngaphezulu ukusuka lapho itholakala khona, sibonga iqiniso lokuthi bakwazi ukuqondisa izindlebe zabo njengama-radar lapho bafuna khona, basebenzise imisipha yabo eyi-17.
Lapho wena njengomqeqeshi ujwayela indlela izindlebe zakho ezisebenza ngayo, uzokwazi lokho akunasidingo ukusebenzisa amakhwela we-ultrasound noma ukumemeza injangoba ikulalela ngokuphelele.
Ngalo mqondo kuzokwanela lokho imiyalo obanikeza yona inethoni efanayo, imakwe kahle futhi iyafana njalo Ukuze baqonde futhi bahambisane nokuthi isijeziso asidingekile, okungenani, kunalokho, kufanele uhlale usebenzisa ukuqiniswa okuhle futhi imiphumela izoba ngcono.
Inja eqeqeshwe kahle enezimpawu zokuzwa ezithuthukisiwe iyakwazi ukuxhasa umuntu onenkinga yokuzwa, empeleni iba izindlebe zayo.
Lokhu kuthola ikhono lokuxwayisa umuntu lapho elalele iwashi le-alamu, elibekwe ngesikhathi somuthi, ukuthi asukume, uma kukhala umnyango, i-alamu yomlilo, uma ingane ikhala, uma kukhona isexwayiso ngaphandle kwekhaya ngomsindo inhlabamkhosi, njll.
Ungayinakekela kanjani indlebe yezinja
Manje njengoba wazi okuthe xaxa ngendlebe yenja, uyakwazi ukubaluleka kwenhlanzeko nokunakekelwa okuhle kwalokhu, ngoba kungenye yezinzwa ezingathwala kakhulu. Ngaphezu kwalokho, iyazwela kakhulu emisindweni, futhi, noma yehla ngokuhamba kwesikhathi, njengoba kwenzeka kubantu, ukugcina inhlanzeko nempilo enhle kungakusiza ukuthi ugweme izinkinga (ezikhona noma ezizayo).
Kepha uzihlanza kanjani izindlebe zenja? Ukwenza lokhu, akwanele ukufuna ukuthenga umkhiqizo bese uwuphonsa futhi kuphelele lapho. Cha, kubalulekile ukuthi, okungenani kanye ngesonto, unikele isikhathi esilwaneni sakho ukuze usisize ngenhlanzeko yezindlebe zakhe (kanye namehlo akhe, ijazi lakhe ...). Kepha ukugxila ezindlebeni, okufanele ukwenze:
Lungiselela lokho okuzokudinga
Ngaphandle kokuthi inja yakho ikujwayele, ngoba ukwenzile kusukela ebuntwaneni, kuzokubiza kancane ukuhlanza izindlebe zayo ngoba izinja azivamisile ukuhlala zihleli lapho uthinta leyo ndawo ebucayi kakhulu kuzo. Ngakho-ke Kulula ukuthi ube nakho konke okuzodinga ukukwenza ukukwenza ngokushesha.
Futhi udinga? Okokuqala, nge-gauze embalwa, umkhiqizo wokuhlanza izindlebe zenja, isikele kanye nama-napkin athile.
Qala ukuhlanza ngaphandle
Ngaphambi kokungena ngaphakathi, kufanele uqale uhlanze ngaphandle ngoba, ngale ndlela, ngeke ulethe ukungcola endlebeni kepha kuzosuswa ngaphambili. Okwakho, kuzodingeka uthathe i-gauze bese uyithambisa. Thatha isikhathi sakho ukuhlanza indawo kahle. Ungathela amanzi noma i-hydrogen peroxide encane, kepha ungayifaki emgodini wezindlebe ukugwema ukuyicasula noma isilwane esizama ukweqa.
Uma unenja enezinwele eziningi endaweni yezindlebe, ungahle udinge sika izinwele kancane ukuze ingangeni emgodini wezindlebe, kanye nokuthi kungabikho ukungcola okungaka. Lokhu kubalulekile ngoba ngaleyo ndlela uzofinyelela ekuhlanzeni okungcono. Futhi, uma wenza lokhu masonto onke uzobona ukuthi kuncane ukungcola kuzo.
Yize kusinda, ukuhlanza ngaphandle kufanele kuthathe isikhathi eside kunangaphakathi futhi kungenxa yokuthi kuzobe kulapho inqwaba enkulu yokungcola iqongelela khona (ngaphezu kweqiniso lokuthi indlebe yangaphakathi ayinakho okuningi).
Ngakho-ke, sebenzisa i-gauze oyidingayo, ihlale imanzisiwe ukuze ihlanzeke kakhulu.
Hlanza umsele wendlebe
Okulandelayo, thinta umsele wendlebe. Kulokhu, uzodinga uketshezi olungabuza udokotela wezilwane ukuthola ukuthi yiluphi aluncomayo. Inhloso ukuthi uthele lolu ketshezi ezindlebeni zakhe, uhlikihle umsuka wendlebe bese uluvumela lusebenze.
Into ejwayelekile ukuthi, uma usuyidedele, inja iyazinyakazisa ukuze isuse uketshezi futhi kungenzeka ukuthi ingxenye yalo iphume, ngakho-ke kuzoba nesinyathelo sokugcina.
Hlanza izinsalela zendlebe
Njengoba nje wenze ngaphambilini, manje kufanele uhlanze umsele wangaphandle futhi nge-gauze oyinyumba futhi omanzi ukususa izinsalela womkhiqizo lokho kuphume endlebeni. Ungakhohlwa ukukwenza ngoba kubalulekile ukuthi konke kuhlanzeke kakhulu.
Izimo ezingadala isifo sendlebe
Ekugcineni, sizokhuluma nawe ngezimo ezingabeka ukuzwa kwenja engcupheni, ngaleyo ndlela kudale izifo ezibalulekile nezibi (njenge-otitis, ukungezwa, njll.). Kulokhu, sikhuluma ngalokhu:
Izinkinga zenhlanzeko ezingezinhle
Ngamanye amagama, ukungakhathazeki ngezindlebe zenja yakho. Ngenxa ye-morphology yayo, izinja azikwazi ukuhlanza kahle izindlebe zazo yingakho kubalulekile ukuthi ubasize. Bekela eceleni isikhathi esincane ngesonto ukuze unakekele ukumsiza ahlanze le ndawo (kanye namehlo akhe).
Njengoba kungenzeka kubantu, izinja azikhululwanga ekuhluphekeni izifo kuyo yonke iminyaka yakhe, futhi lokho kusho ukuthi kufanele unakekele impilo yakho futhi unake izimpawu zokuqala lokho kuzokusiza ukuthi ubone ukuthi kukhona okungahambi kahle. Isibonelo, iqiniso lokuthi isilwane siphendulela ikhanda laso ohlangothini olulodwa, ukuthi indlebe yaso yehlisiwe, ukuthi ayikuvumeli ukuthi uyithinte noma ukuthi, uma uyithinta, iyakhalaza noma ngabe awenzi lutho kuyo.
Amanxeba nawo angajwayelekile ezinjeni, ikakhulukazi uma unganakekeli ukukhula kwazo, ngoba ngesikhathi sokuklwebha zingadala ukulimala okuthile. Kungenzeka futhi uma bezilimaza bona, kungaba sekulweni, bezama ukufika ndawo, njll.
Ngakho-ke, kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi zihlala zisesimweni esihle futhi ziyaphola uma kungenzeka kube nesilonda ukuze singatheleleki noma sithonye indlebe yangaphakathi.
Izinto noma izimuncagazi endlebeni yangaphakathi yezinja
Esinye isimo inja yakho engadlula kuso ukuthi enye into ihlala endlebeni yakhe, izimuncagazi noma esinye isilwane esincane esilahlekelwe indlela yaso futhi sangena endlebeni yesilwane sakho. Uma lokho kwenzeka, kufanele uyisuse ngokushesha ukuze ingalimazi isilwane sakho, kungaba nguwe noma ngokuya kudokotela wezilwane wakho.
Ngemuva kwalokho, indawo kuzodingeka inakekelwe izinsuku ezimbalwa ukubona ukuthi azikho izinkinga ezitholakala kulokhu.
Ingabe inja yakho iyawathanda amanzi? Ingabe ungomunye walabo bageza kakhulu ehlobo? Ebusika? Yebo, kufanele wazi ukuthi iqiniso lokugeza, nokuthi amanzi awela endlebeni yakhe, Kungadala ukutheleleka ezindlebeni noma ukutheleleka okudinga ukwelashwa.
Ngalokhu asifuni ukukutshela ukuthi ungamgezi, noma ukwenze ngezikhathi ezithile, kepha ukuthi uma wenza kanjalo, zama ukomisa izindlebe zakhe kahle ukugwema izinkinga ezizayo kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Umuzwa ongavamile wokuzwa ezinjeni
Inja yokuziphendukela kwemvelo